Wasiir Khadiijo oo Farriin U Dirtay Madaxda Dowladda Soomaaliya (dhegayso) – Radio Daljir
Wasiir Khadiijo oo Farriin U Dirtay Madaxda Dowladda Soomaaliya (dhegayso)
May 16, 2017 6:21 b 4
Wasiirka Wasaaradda dhalinyaradda iyo Cayaaraha dowladda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in la caddeeyo xuquuqda ay leeyihiin dhalinyaradda Soomaaliyeed.
Wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in dhalinyaradda Soomaaliyeed xuquuqdooda uusan qeexeen dastuurka ,islamarkaana laga doonaayo Madaxda dowladda in ay ka shaqeeyaan sidii dhalinyaradda ay heli lahaayeen xuquuqdooda.
Beesha Jareer Weyne oo Ciyaar Dhaqameed Ku Soo Bandhigay Boosaaso (Sawirro+cod)
Madaxweyne Farmaajo,”Waxaan Bedeli Doonaa Magaca Cashuur” (dhegayso)
Assalaamu alaykum Radio Daljir , Bacda Salaam waxaan u arkaa hadalka wasiirad Khadiijo Mohamed Diiriye , mid loo baahnaa oo waxaa laga baahan yahay wasaarada ay madaxda ka tahay in ay Golaha Baarlamaanka Xeerka Hoosaadyada Xuquuqda Dhalinyada ee la xiriira Ilaalinta Dhalinyarada , Ka Jahaynta Burcad Badeeda iyo Xaquuqda ay kaga mid noqonayaan Dowlada iyo Hay’adaheeda
Mohamed massari 1 year
waa arin wanaagsan hadii aa nahey dhalinyarada soomaaliyeed. wasiiir Khadiija aad bay umahadsanthy.
Waa arin wanaagsan hadii aa nahey dhalinyarada soomaaliyeed, wasiiir Khadiija aad bay umahadsanthy.
wasiiradu way ku mahadsan thy fariinta ay u dirty madaxweynaha